Ebe ịchụàjà nke àjà a na-esu ọkụ (1-8)
Ogige ụlọikwuu (9-19)
Mmanụ e ji amụ ọkụ (20, 21)
27 “Ị ga-eji osisi akeshịa rụọ ebe ịchụàjà.+ Ọ ga-adị kubit* ise n’ogologo na kubit ise n’obosara. Ebe ịchụàjà ahụ ga-enwe akụkụ anọ há nhata, ọ ga-adịkwa kubit atọ n’ịdị elu.+ 2 Ị ga-arụnye mpi+ n’akụkụ ya anọ. Ị ga-arụkọta mpi ndị ahụ na ebe ịchụàjà ahụ ka ha bụrụ otu, ị ga-ejikwa ọla kọpa machie ebe ịchụàjà ahụ.+ 3 Ị ga-arụ bọket a ga-eji na-ekpopụ ntụ ya,* rụọkwa shọvel, efere, ndụdụ, na ihe ndị e ji agụnye ọkụ. Ị ga-ejikwa ọla kọpa rụọ arịa ya niile.+ 4 Ị ga-eji ọla kọpa kpaa ihe a ga-etinye n’ime ebe ịchụàjà ahụ, jirikwa ọla kọpa kpụọ ihe anọ dị okirikiri ga-adị n’elu ihe ahụ a kpara akpa, n’akụkụ ya anọ. 5 Ị ga-etinye ihe ahụ a kpara akpa n’okpuru ọnụ ebe ịchụàjà ahụ. Ọ ga-adị n’ime ebe ịchụàjà ahụ, n’ebe etiti ya. 6 Ị ga-eji osisi akeshịa rụọ okporo osisi maka ebe ịchụàjà ahụ, jirikwa ọla kọpa machie ha. 7 A ga-etinye okporo osisi ndị ahụ n’ihe ndị ahụ dị okirikiri, ka okporo osisi ndị ahụ wee dịrị n’akụkụ abụọ nke ebe ịchụàjà ahụ mgbe a na-ebu ya.+ 8 Ị ga-arụ ebe ịchụàjà ahụ ka ọ dị ka igbe osisi nwere oghere. Ị ga-arụ ya ka ọ dị nnọọ otú m gosiri gị n’ugwu.+ 9 “Ị ga-agba ụlọikwuu ahụ ogige.+ N’akụkụ chere ihu n’ebe ndịda, ogige ya ga-enwe ákwà mgbochi ndị e ji ezigbo eri linin a kpara akpa kpaa. Otu akụkụ ya ga-adị otu narị (100) kubit n’ogologo.+ 10 Ọ ga-enwe ogidi iri abụọ na ntọala iri abụọ nwere oghere ndị e ji ọla kọpa rụọ. Ị ga-eji ọlaọcha rụọ ihe ndị e ji ekonye ihe n’ogidi ndị ahụ nakwa ihe ndị e ji ejikọ ihe* na ha. 11 Ákwà mgbochi ndị ga-adị n’akụkụ ebe ugwu ya ga-adịkwa otu narị (100) kubit n’ogologo. Ọ ga-enwekwa ogidi iri abụọ na ntọala iri abụọ nwere oghere e ji ọla kọpa rụọ na ihe ndị e ji ekonye ihe n’ogidi ndị ahụ nakwa ihe ndị e ji ejikọ ihe* na ha, bụ́ ndị e jicha ọlaọcha rụọ. 12 A ga-enwe ákwà mgbochi ndị ga-adị n’akụkụ ebe ọdịda anyanwụ ogige ahụ. Ha ga-adị kubit iri ise n’obosara, nweekwa ogidi iri na ntọala iri ndị nwere oghere. 13 Akụkụ ogige ahụ nke chere ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ ga-adị kubit iri ise n’obosara. 14 A ga-enwe ákwà mgbochi ndị dị kubit iri na ise n’otu akụkụ nakwa ogidi atọ na ntọala atọ ndị nwere oghere.+ 15 A ga-enwekwa ákwà mgbochi ndị dị kubit iri na ise n’akụkụ ya nke ọzọ nakwa ogidi atọ na ntọala atọ ndị nwere oghere. 16 “Ọnụ ụzọ ogige ahụ ga-enwe ákwà ngebichi* nke ga-adị kubit iri abụọ n’ogologo. A ga-eji eri na-acha anụnụ anụnụ, ajị anụ na-acha pọpụl, eri na-acha uhie uhie, na ezigbo eri linin a kpara akpa kpaa ya.+ Ọ ga-enwekwa ogidi anọ na ntọala anọ ndị nwere oghere.+ 17 Ogidi niile ndị ga-agba ogige ahụ gburugburu ga-enwe ihe ndị e ji ejikọ ihe na ha na ihe ndị e ji ekonye ihe, bụ́ ndị e jicha ọlaọcha rụọ. Ma, a ga-eji ọla kọpa rụọ ntọala ha ndị nwere oghere.+ 18 Ogige ahụ ga-adị otu narị (100) kubit n’ogologo,+ kubit iri ise n’obosara, na kubit ise n’ịdị elu. A ga-eji ezigbo ákwà linin a kpara akpa rụọ ya, ọ ga-enwekwa ntọala ndị nwere oghere e ji ọla kọpa rụọ. 19 A ga-eji ọla kọpa rụọ arịa niile a ga-eji na-eje ozi n’ụlọikwuu ahụ nakwa mkpọ́ ndị e ji ejide ụlọikwuu na mkpọ́ niile e ji ejide ogige ụlọikwuu ahụ.+ 20 “Ị ga-enye ndị Izrel iwu ka ha wetara gị mmanụ oliv a na-agwaghị agwa a ga-eji na-amụ ọkụ, ka ọkụ* ndị ahụ wee na-enwu mgbe niile.+ 21 N’ụlọikwuu nzute, tupu ebe ahụ e ji ákwà mgbochi gebichie, nke dị nso n’igbe ọgbụgba ndụ*+ ahụ, Erọn na ụmụ ya ga na-ahụ na ọkụ* ndị ahụ na-enwu malite ná mgbede ruo n’ụtụtụ n’ihu Jehova.+ Ọ bụ iwu ga-adịgide adịgide nke ọgbọ niile nke ndị Izrel ga na-edebe.+
^ Na Hibru, “n’Ihe Àmà.”